Sein Lyan - စိ န် လျှံ: ချစ်ခြင်းအနုပညာ
Writer Sein Lyan Time 4:21 pm
၁ လာယူတာ :D
အဲဒီကိုနေဒေးက တနေကုန်များ စောင့်နေတာလားမသိဘူး..ဟွန်း.
ဖြစ်နိုင်ရင် အဲ့ ကဗျာ စာအုပ်ထဲက ကိုဖိုးချိန် လက်ရာ အားလုံး ဖတ်ချင်တယ် ...
ကဗျာလေးလှတယ်.. ထပ်ရေးဦးလေ.. အဟောင်းတွေ ပြန်ခံစားနေတာလား
စိတ်မဆိုးပါနဲ့နော်။မနေ့ကစာမေးပွဲရှိလို့ ဘယ်အိမ်မှမလည်ဖြစ်ဘူးလေ။ ဒီနေ့မနက်ကျတော့ အိမ်လိုက်လည်နေတာ၊ကိုကြီးအိမ်ရောက်နေပြီ၊ဖတ်လဲဖတ်ပြီးပြီ။မန့််မလို့ဟာ သူဌေးကတော်လာလို့လေ။သူထွက်သွားလိုက် မန့်မလို့လုပ်လိုက် သူပြန်ဝင်လာလိုက်နဲ့ မမန့်ဖြစ်တာ။ စိတ်ဂျိုးနဲ့နော်။ရော့ရော့ ရေခဲမုန့် ဝယ်လာတယ်။စိတ်ဆိုးပြေလိုက်နော်။
အချစ်တွေကို ခုတလော တော်တော် ခံစားမိနေပုံရတယ်။ ဟုတ်စ။
အမနော်လို ၀ိုင်းပြီး ဆုတောင်းပေးသူတွေ အများကြီးပါ ညီလေး။ ချစ်ခြင်းရဲ့ အနုပညာ ကို ခံစားသိတတ် နားလည်သလို ချစ်သူကို ချစ်တတ်သူ တယောက်လဲ ဖြစ်ပါစေဗျာ။
*ဒီထဲကမှ တစ်ယောက်သောသူကို ရည်ရွယ်ပြီးရေးပေးခဲ့တဲ့ ကဗျာလေး* တဲ့။ ဆိုင်သူတယောက်လဲ ဒီကဗျာလေး ဖတ်ကာ အမှတ်ရပါစေဗျား။
အချစ်နှင့်ထုံမွှန်းသော အနုပညာမြောက်တဲ့ ဘဝတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်ပါစေ။ကောင်းကင် အိုအို အောက် မှာလည်း စံပယ် ညိုညိုတွေလည်း အဆင်ပြေပြေ ပွင့်နိုင်ပါစေဗျာ။
အဘိုးကြီး လေသံနှင့် ဆုတောင်းသွားသည်။ :)
ဖိုးကြံ ဆိုတာ ကလောင်နာမည်လား :)
ညီမဂျစ် ကဗျာလေးကိုကြိုက်မိတယ် ။
အဲ့ဒီကဗျာလေးက ခုထိအမှတ်တရ ကိုကြီး
ဆီမှာ ရှိနေသေးတာကို လေးစားမိတယ်။
ညီမလေးကတော့ ညီမလေးချစ်သူ ပေးတဲ့
ကဗျာတွေ စာတွေကို သိမ်းထားလေ့ရှိတယ် ...။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ဂျစ်ကိုကြီး ချစ်တဲ့သူနဲ့ ပေါင်းရပါစေ..။
ဘ၀လှလှလေး ပိုင်ဆိုင်ပါစေ............လို့ ဂျစ် ဆုတောင်းပေးလိုက်တယ်.....ကိုကြီး။
ခုထိကော ရှိသေးလား။ အဲ့ တစ်ယောက်သော သူလေး။
ကဗျာရဲ့ အသက်က ကာရံဗျ...ကာရံထည့်ပါမှ ရွတ်ဖတ်ရာမှာ သာရာချောမွှေ့မှုရှိခြင်း...မှတ်သားရလွယ် ကူခြင်း... (အဓိပ္ပါယ် လေးနက်မှုပေါ် မူတည်၍) ခေတ်ကာလမရွေး အမြဲကျန်ခြင်း ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်တွေရ နိုင်မှာပေါ့...ငါလဲကာရံ မင်းကိုပဲဆရာလုပ် လိုက်တယ်....ဟီးဟီး...
မင်းနားမလည်ရင်ိနေပါ ဆိုတော့ ဟိုက အူကြောင်ကြောင်ဖြစ်နေမှာပေါ့ဗျ။ နားလည်အောင်လုပ်လေဗျာ ဒါမှနှစ်ဦး နှစ်ဖက် အဆင်ပြေတော့ မပေါ့။
ဒီကဗျာကဘာအမျိုးမစားလည်း.... ချစ်သူနားလည် မလည် တော့မသိဘူး ကျွန်တော်တော့ နားမလည်ဘူး
ဘာလို့ ဘူတာကျော်ရပ်တာလည်း... ကြားထဲက လူတွေ ကို မတင်ချင်လို့ လား...။
ရေဇလုံထဲမှာ လှိုင်းကြပ်ခွပ်ထတာတော့ မမြင်ဖူးသေးဘူး
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လို လုပ်ရမလဲ ရှင်းပြပါလား
လိုက်ဖျက်စီးတယ်လို့ မထင်နဲ့ နော်...။
ရေဇလုံထဲမှာ လှိုင်းကြပ်ခွပ်ထအောင် ဇလုံကို လေတိုက်တဲ့
ဒီရက်ပိုင်းလေတွေမှာ.....ကဗျာလေးတွေခံစားနေတာ.... သတိထားမိလာတယ်...တခုခုတော့ လိုနေပြီထင်၏......တခုမက....လိုအပ်သည်များ....မတောင်း..မတ..မကြောင့် ကျဘဲ...တလုံးတ၀တည်းသာ..ပြည့် စုံသည်...ဖြစ်ပါစေဗျား.....ချစ်တဲ့ ...ကိုကြီး....သုဒြေ္န
အော်.....ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ချစ်သူအတွက် ကိုစိန် မှာ သတိရခြင်းလေးတော့ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိမှာပါ၊ တစ်နေ့ အဆင်ပြေတဲ့ ကောင်းကင်အောက်မှာ စံပယ်ညိုညိုကို ချစ်သူအတွက် ဖန်ဆင်းပေးနိုင်ပါစေ.......
(အီးမေး မှားပြီးထည့်လိုက်မိလို့ ထပ်မန့်လိုက်တာပါ)
ဘာပြောရ မှန်း ကို မသိလို့ 
ဘာမှ မပြော တော့ ဘူး ဆို တာ ကို
ပြော ကို မပြောချင်တော့ဘူး ...
ပြော ကို မပြောချင်တော့ဘူး .......
ဒေါ်မြလေး လေသံ နဲ့ပြောသွား ပါတယ် .
ကဗျာကောင်းလေးတွေကို လာခံစားသွားတယ်ဗျ ကိုဖိုးစိန်ရေ ငယ်လယ်ရာဆိုပေမဲ့ ကဗျာလေးကေင်းတယ်ဗျာ။
ကဗျာလေး လာခံစားတယ် အကိုရေ.. ဒီရောက်ရင် ကော်ဖီလိုက်တိုက်မယ် အားမငယ်နဲ့ စိတ်မပျက်နဲ့ ဆက်ရေးဗျာ
ညီတော့ နည်းနည်းထိထားတာ သက်သာသွားပြီ
အဟတ် ကဲ ခုချိန်ကစပြီးညီ သောင်းကျန်းတော့မယ်
ဒီအတိုင်းမနေပါနဲ့ငှဲ့ ပေးပါ အရက်
အဟတ် အမှန်က ဒီလို မလား ချစ်ကိုရ
3 July 2009 at 02:42
ဘူတာကျော်ပြီး ရပ် ရင် ပြေးလိုက်ရမှာ ပေါ့..
ရပ်ရိုး ရပ်စဉ် ရပ်..း))
စပယ် ပန်း သိပ်ကြိုက် မွှေးနေတာပဲ..